#GuptaEmails: Okunye okuvelile emiqulwini eputshukile | News24
#GuptaEmails: Okunye okuvelile emiqulwini eputshukile
#GuptaEmail: Amakhulu ezinkulungwene zemiqingqo esazovela obala
Johannesburg - Ubukhulu bezinsolo zamandla umndeni wakwaGupta onawo kwiNingizimu Afrika kanye nabaholi bawo kungase kuhlale obala uma ngabe sekukhishelwa izintatheli maduzane ama-email aphakathi kuka-100 000 kanye no-200 000.
Ingxenye yala ma-email iputshuzelwe amaphephandaba angeSonto, iSunday Times kanye neCity Press, nokuyiwona ashicilela kuqala lezi zindaba ngempelasonto. Ngemuva kwalokhu sekube nemibiko eminingi elandelanayo esukela kulama-email kuNews24, iCity Press, kanye neTimesLive.
Ithimba labaphenyi kwiDail Maverick, iScorpio kanye namaBhungane babhale i-editorial ngoLwesine ukuthi sebekwazi ukufunyelela kwinqwaba yama-email nabathi bazowenza atholakale “ezintathelini zangempela”, ehambisana nezindaba ezizoqhamuka kuwona.
“Bekuwukuhlela kwethu ekugcineni ukubeka ama-#GuptaLeaks enkundleni okuzofinyeleleka kuyona nakwabanye bezindaba ukuze kuqhutshekwe nophenyo.
“Manje sesiphinde sabeka ama-#GuptaLeaks ezandleni zenhlangano yaphesheya nezokuwafaka endaweni ephephile, nalapho ngokushesha kuzofinyeleleka kuwona kwinqwaba yezintatheli zangempela, okubalwa iSunday Times kanye neCity Press… Lolu lwazi luyingozi kakhulu futhi lubaluleke kakhulu ukuthi kungabelwana ngalo. “
Le mithombo yezindaba ithi ibisihlale nalo lwazi isikhathi eside kodwa yangalushicilela “ukwenzela ukuthi kuphenyisiwe futhi kuphephe ababhoboze ithumba.”
Funda inqwaba yemibiko yeNews24 yama-#GuptaEmails lapha.
Ama-#GuptaEmails akhombisa uNgubane namaGupta ezingxoxweni ‘zokugwazela’
Johannesburg – Imizamo eyahluleka yokuthola izivumelwano zebhizinisi likawoyela eCentral African Republic of Congo (CAR) iyamanisa inkampani exhumene noSihlalo waka-Eskom, uBen Ngubane kanye nesikhulu esisebenzisana namaGupta uSalim Essa ezingxoxweni ezithinta “imihlomulo yasekusithekeni” ezikhulwini zikahulumeni wakuleliya lizwe.
Ama-email kanye nemiqingqo etholwe yiphephandaba elingumlingani weNews24, iCity Press ikhombisa ukuthi ngo-2013 – ngemuva kwezinyangana kwabulawa amasosha aseNingizimu Afrika angu-13 ngesikhathi ezama ukuqeda ukuvukelwa kukahulumeni ngodlame eCAR – amaGupta athunyelwa umyalezo ochaza ngokuthi inkokhelo ya-$6m ukuze kutholwe isiqeshana sendawo kawoyela inkampani exhumene namaGupta eyagcina izama ukuyithola.
I-email eyadluliselwa kuRajesh “Tony” Gupta, omncane kunabo bonke ezinsizweni zakwaGupta ezintathu, ngoJulayi 2013, kusolwa ukuthi yayiyimizamo yeGade Oil and Gas, abaqondisi bayo ngaleso sikhathi okwakungu-Essa kanye noNgubane, yokuthi ithole amalungelo okumoma uwoyela esiqeshaneni esise-North East neCAR.
Imizamo yeGade Oil and Gas yayibandakanye ukuxhumana phakathi kosomabhizinisi ababili baseNingizimu Afrika kanye nowayenguNgqongqoshe wezaWoyela kanye neziMbiwa phansi eCAR.
Kokunye kwalokhu kuxhumana kwakhulunywa ngemali ezokhokhelwa uNgqongqoshe wezaWoyela kanye neziMbiwa phansi ukuze inkampani kaNgubane no-Essa ithole amalungelo okumoma uwoyela.
Funda udaba oluphelele lapha
Olwe-Eskom nenkampani yamaGupta luzobuyela ePhalamende
Cape Town - Isigcawu esigxile esivumelwaneni sokuphakelana ngamalahle phakathi kwa-Eskom neTegeta sizobuyela ePhalamende ngoLwesibili, ngemuva kwezinsuku ezimbili kuputhuzelwe abezindaba ama-email okusolakala ukuthi axhumanisa umndeni wakwaGupta nezikhulu zikahulumeni.
Ngomhlaka-10 kuMeyi, ikomiti lasePhalamende iStanding Committee on Public Accounts (Scopa) lalalela ukuthi isivumelwano sika-Eskom nenkampani ephethwe wumndeni wakwaGupta iTegeta Explorations and Resources sokunikezela ngamalahle sasingawenzi umqondo, sasihlanganiswe ngendlela esezingeni eliphansi futhi sasiphikisana nemigudu okumele ilandelwe uma kunikezelwa ngethenda.
IHhovisi loMgcinimafa lifuna ukulungisa izinto ne-Eskom, okubalwa nokubalwa kwemali engu-R659 u-Eskom ayikhokhela iTegeta ingakawenzi nomsebenzi, obambe njengeChief Procurement Officer uSchalk Human ucashunwe esho kanjalo kuBusiness Day ngoMsombuluko.
Kodwa-ke u-Eskom ucele ithuba lokunikwa esinye isikhathi ukuze ulethe eminye imiqingqo uphinde ukwazi nokubamba umhlangano neHhovisi loMgcinimafa, ngokombiko ofanayo.
#GuptaEmail: Lihlale obala itulo lokudukisa abantu nabezindaba ngamaGupta
Johannesburg – Ubukhulu bomkhankaso wezigidigidi zamarandi owawuhlose ukudida abantu baseNingizimu Afrika bese kususwa amahlo ezigemegemeni ezenziwa uMengameli Jacob Zuma nomndeni wakwaGupta buhlale obala kuma-#GuptaEmails atholwe yiCity Press.
Lama-emails aphakathi kwamaGupta, abasebenzi bawo, inqwaba yabasebenzisana nabakwaGupta kanye nezikhulu eziphezulu zikahulumeni, idalula ukusondelana kwalo mndeni noMengameli Jacob Zuma, yindodana yakhe uDuduzane Zuma, kanye nabanye ongqongqoshe kwiKhabhinethi.
UMmeli wamaGupta, uGert van der Merwe uthi useluleke ikilayente lakhe ukuthi libeke amacala obugebengu amaziko ezindaba kanye nezintatheli ngokushicilela lama-emails “okugxambukelwe kuwona”.
Phakathi kweminye yemiqingqo kubalwa ukuxhumana phakathi kwenkampani ekhangisa noma yakhe isithombe esihle emphakathini (public relations) ezinze eLondon, iBell Pottinger, kanye nabasebenzi bamaGupta.
Lama email aveza ukwakhiwa kwetulo lokugxeka labo abagxeka amaGupta, nokuthi ingasetshenziswa kanjani i-African National Congress kanye nezinhlaka zayo ukuze zivikele lo mndeni kwabezindaba.
#GuptaEmails: OwakwaGupta ucetshiswe ngokumangalela abezindaba
Amalungu omndeni wakwaGupta asecetshiswe ngabameli bawo ngokuvulela abezindaba amacala ngokushicilela ama-email aputshukile ayephakathi kwawo, abasebenzi, abasondelene nawo kanye nezinye izikhulu zikahulumeli eziphezulu.
Bacetshiswe ngokuthi bavulele izintatheli nabahleli icala lokubathuka, kusho ummeli uGert van der Merwe etshela abezindaba iNew24 ngoLwesithathu.
Lo mmeli uhlangane namakhasimende akhe ngoLwesibili ntambama kulandela ukushicilelwa kodaba lwe-email leziqhumane oluvele kwiphephandaba iCity Press neSunday Times ngempelasonto.
Womabili la maphephandaba aveze imininingwane equkethe ama-email anezinhlelo zikaMengameli Jacob Zuma okuthuthela eDubai.
Kukhona ochibiyele ama-email
UVan der Merwe phakathi nomhlangazo abenawo namakhasimende akhe kanye nofakazi uthe, kubonakala sengathi "la ma-email aputshukile" achitshiyelwe.
"La bofakazi abachazwe kula ma-email bakuphikile okukulama-email. Empeleni baphika ubuqotho bala ma-email.
"Ngiwakhuthazile amakhasimende ami ukuthi avulele abamaphephandaba nezintatheli amacala okukhwabanisa imiqulu."
UVan der Merwe uthe akwamukelekile ukuthi yena njengesisebenzi sasenkantolo ukuthi ethule ubufakazi ngemiqulu ekokoteliwe, lokhu kungemuva kokuba iDA ivulele uZuma nomndeni wakwaGupta amacala.
Yize kunjalo uVan der Merwe uthe ofakazi bamutshele ukuthi amanye amakheli ala ma-email awomgunyathi.
Uthe ukuputshuka kwalama-email kwenzelwe ukuthi kusuleleke amakhasimende akhe ngenxa yokuzibandakanya nomengameli.
"Ipolitiki nje," usho njalo.
#GuptaEmails: I-SA High Commissioner yasiza ngokutholela owakwaGupta owokuba yinxusa
Johannesburg - Owayeyilungu lebhodi le-SAA uRajesh Naithani akazange agcine ngokunikeza abakwaGupta imininingwane ngokuqhubeka ngaphakathi e-SAA kodwa kubonakala sengathi waphinde wasebenzisana neHigh Commissioner eNdiya ngemizamo yokutholela u-Anil Gupta umsebenzi wokuba yinxusa.
Kuhide lwama-email asezandleni lwephephandaba iCity Press ngomndeni wakwaGupta namabhizinisi awo, kunenqwaba yama-email avela kuNaithani owayeyilungu lebhodi le-SAA ne-SA Epress ku-Ash Chawla oyisikhulu seSahara computers.
UNaithani kuzwakale ukuthi wayehla enyuka ngezindiza esuka eNdiya eya eNingizimu Afrika ehambela imihlangano kanti kusolwa ukuthi wathumela uChawla imininingwane emayelana nokuqhubeka ngaphakathi e-SAA
UNaithani waphinde kwezwakala ukuthi wacela isikhundla sokuba yilungu lebhodi lakwaTransnet ngemuva kokukhishwa kwibhodi lakwa-SAA.
Alikho icala ekukhulumeni namaGupta - Manyi
Kunama-email aphakathi kuka-Naithani, uChawla nekhomishana lakuleli laseNdiya uRev Harris Majeke bonke behlela ukutholela u-Anil Gupta isikhundla sokuba yinxusa laseNdiya.
La ma-email atshengisa uNaithani, uChawla no-Atul Gupta bedingida iCV ka-Anil Kumar Gupta yokugcina.
Izikhungu ezizimele sezithole ukuthi abomndeni wakwaGupta namacala okwenza okuphambene, kusho iNhloko yeProgressive Professional Forum (PPF) uMzwanele "Jimmy" Manyi.
NgoMsombuluko ebusuku emsakazweni iCape Talk uManyi ubephendula ngemibiko yangempelasonto ukuthi waya emndenini wakwaGupta eyozicelela umsebenzi kanye nommeli uXoliswa Mpongoshe.
Ama-email amabili avela kuManyi kwi-akhawunti yakhe ye-Gmail ebhekiswe ku-Ashu Chawla isikhulu esiphezulu seSahara ngo-2014 aveza ukuthi washo kanjani " njengoba ayekhulume noTony (Gupta)" wabe esefaka nama-CV amabili. La ma-email ayingxenye enkulu yenqwaba yama-email atholwe ngabezindaba o-City Press osebenzisana neNews24.
NgoMsombuluko, uManyi owayeyisikhulumi sikahulumeni uthe, akukho okubi ngakwenza futhi uma angase anikezwe ithuba angaphinda.
Uthe abantu bayawudinga umsebenzi kangangokuthi wayengenza noma yini uma kuvela ithuba lokubasiza.
"Uma bethi kunelungu lomndeni wakwaGupta elingasiza, ngingabanika abakwa-Gupta i-CV," kusho uManyi.
"Kule lizwe abantu bayawudinga umsebenzi. Badla amagundane, izinyoka, utshani baze baphuze ngisho nophethiloli ngenxa yokuzidela. Manje uma ngikwazi ukusiza la engingasiza khona abantu bangadli amagundane kodwa ngizame noma ngiqinisekise ukuthi ama-CV abo angena ezindaweni ezifanelekile ngingakwenza lokho. Ngingakwenza namuhla? Ngingakwenza futhi nanamuhla."